May 21, 2020 – Xorriya Online
Wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii labaad oo xiriir ah magaalada Muqdisho kawada ololaha wacyigalinta ka hortaga cudurka safmarka ah ee covid-19. Waaxaana qaar ka mid masaajida caasimada ay u qeybiyeen cod baahiyaal, sameecado, maaska afka lagu xerto iyo agabyo kale oo loogu talagalay ka hortaga cudurkaasi covid-19 Dadka ku […]
Wasaaradda Caafimaadka Oo Xaqiijisay xaalado cusub oo Coronavirus ah
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID19 ku sheegtay inay Feyruska Karoona ka bogsoodeen 16 qof oo cusub taas oo tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigeysa ku dhawaad 204 Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaan geliyay 21 xaalado […]
Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle oo booqday deegaano ay fatahaadu saameysay
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Gobolledka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday deegaano ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku yaal degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe. Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa warbixino ka dhagaystay qaar kamid ah mas’uuliyiinta maamulka degmada Mahaday oo uu ka mid yahay guddoomiyaha degmada […]
Madaxweynaha Puntland oo iska diiwaan geliyay urur Siyaasadeedka cusub
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullllaahi Deni ayaa maanta si rasmi ah isaga diiwaan geliyay urur siyaasadeedka cusub oo la magac baxay Kaah. Madaxweyne Deni ayaa xarunta Ururka Kaah waxaa ku soo dhoweeyay Guddoonka KMG ee Ururka iyo qaar ka mid ah Xubnaha Ururka. Urur Siyaasadeedka dowladda ee Kaah ayaa ka mid ah ururada siyaasadda Puntland, iyadoo […]
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta Agaasimaha Hey’adda CIS kala wareegay agab loogu tala galay in looga hortago faafitaanka cudurka safmareenka ah ee Covid-19. Gudoomiye Cumar Filish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Agaasimaha Hey’adda CIS, iyagoo ka wada hadlay sidii Maamulka Gobolka Banaadir uga gacan siin lahaa dadaalada looga […]
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ahna musharax Madaxweyne 2021 Daahir Maxamuud Geele, ayaa si kulul uga hadlay Dacwadda Muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya ee Saddexda jeer Maxkamadda ICJ ay dib u dhigtay qaadista kiiskaas. Qoraal dheer oo uu soo saaray ayuu ku caddeeyey in dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo aysan jirin […]
Guddiga dhameystirka sharciga doorashooyinka oo todobo maalin loo qabtay
Guddiga wadajirka Baarlamaanka ee dhameystirka habraacyada sharciga doorashooyinka ayaa shalay warbixin ka siiyay Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka howlihii guddiga u qabsoomay. Ibraahim Isaaq Yarow oo ah Guddoomiyaha Guddigan ayaa sheegay intii uu fasaxa ku maqnaa Baarlamaanka ay shaqeynayeen, isagoo xusay inuu saameyn ku yeeshay Coronavirus, la tashadii ay la yeelan lahaayeen dadka ay […]
Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay howlgal waxaa ay ku burburiyeen goobo ay ku ganacsanayeen dad rayid ah oo ku yaalla hareeraha laamiga Makka Almukarama gaar ahaan agagaarka laami yaraha Soobe ee magaalada Muqdisho. Howlgalkaan oo xalay xilli dambe la fuliyay ayaa sigaar ah waxaa loo beegsaday miisas ay haweenka danyarta waxyaabo ay kamid yihiin hilibka […]
Xanuunka COVID-19 oo ku dhacay shan milyan oo qof iyo xaalka aduun oo sii xumaaday
Sida ay baahisay Jaamacadda Johns Hopkins, oo uruurisa xogta COVID-19 ayaa sheegtay in tirada dadka qaba ee Coronavirus ay gaartay 5 milyan oo ruux guud ahaan caalamka, sidoo kale 328,000 oo ruux ayaa u dhimatay xanuunkan. Iyadoo ku dhowaad 1.9 milyan oo qof ay ka bogsoodeen. Hey’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan ee WHO ayaa xaqiijisay […]
Madaxweyne Waare oo xukuumada Soomaaliya kala hadlay fataadahaha Beledweyne
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyay shirka joogtada ah ee Guddiga Qaran ee Xakameynta cudurka safmareenka ah ee COVID-19, kaas oo looga hadlay arrimaha dhowr ah. Kulanka oo u qabsoomay hab muuqaal Internetka ah sababo la xiriira Cudurka Coronavirus ayaa waxaa markii ugu horeeysay ka qeyb galay Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi […]